Avy amin'ny Airline Italia Trasporto Aereo mankany amin'ny valisoa Loyalalty Alitalia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Avy amin'ny Airline Italia Trasporto Aereo mankany amin'ny valisoa Loyalalty Alitalia
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Inona no mitranga amin'ny valisoa tsy fivadihan'ny Alitalia?
Amin'ny fanombohan'ny hetsika Italia Trasporto Aereo (ITA) vaovao - fantatra taloha amin'ny anarana hoe Alitalia - dia hiasa fiaramanidina miisa 52 ny 7A, ny 45 amin'izy ireo dia vatana malalaka sy vatana tery XNUMX. Fa inona no hitranga amin'ny valisoa tsy fivadihan'ny Alitalia amin'ny tetezamita?
Ny tale jeneralin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka vaovao, Fabio Lazzerini, dia nanamafy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa hitombo ho 78 ny fiaramanidina amin'ny 2022.
Ity fisondrotana ity dia hitondra fiaramanidina 26 fanampiny ka ny 6 ho vatan'ny malalaka sy vatana 20 tery.
Inona no hitranga amin'ny valisoa tsy fivadihan'ny Alitalia rehefa miainga ny kaompaniam-pirenena vaovao?
Hoy i Lazzerini: "Manomboka amin'ny 2022, manantena izahay fa hanomboka ny fampidirana ireo fiaramanidina vaovao ao anaty fiaramanidina, izay hisolo tsikelikely ireo fiaramanidina teknolojia taloha. Amin'ny faran'ny 2025, ny sambo dia hitombo ho 105 (vatana 23 mivelatra sy vatana tery 82), miaraka amin'ny fiaramanidina vaovao 81 (mitovy amin'ny 77 isan-jaton'ny sambo fitaterana) izay mamela - amin'ny fikasan'ny newco - hivoatra mampihena ny tontolon'ny fiatraikany ary manatsara ny fahombiazan'ny tolotra. "
NY karatra maha-mahatoky
ITA dia manao veloma ny Alitalia MilleMiglia - Inona no mitranga amin'ireo teboka ao amin'ny karatra Alitalia?
Ny kapila fahatokisana dia avy ao Alitalia mankany ITA dia kasaina hatao amin'ny tapaky ny volana oktobra rehefa mijanona tsy manidina ny Alitalia ary manomboka ny ITA (Italia Air Transport) vaovao, izay hamela fiaramanidina 52 fotsiny. Raha ny filazan'ny CEO vaovao, dia ampy “hifaninanana” ity. Nilaza izy fa na dia marina aza fa manana fiaramanidina lehibe kokoa ireo orinasa hafa, “firy ny fiaramanidina tena manidina amin'izao fotoana izao?” Lazaro Lazzerini, nomena ny krizy COVID, vitsy ireo.
Nanazava i Lazzerini: “Mba hialana amin'ny fandaniana ny volan'ny governemanta italianina, dia nisafidy fomba iray miandalana mifandraika amin'ny volan'ny fifamoivoizana antenaina izahay mandritra ny volana ho avy. Raha tsy mitarika fanidiana vaovao ny fiovana dia hampiakatra ny isan'ny fiaramanidina [ho 78 amin'ny 2022] ny orinasa miaraka amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana. ”
Inona no mitranga amin'ny karatra MilleMiglia an'i Alitalia?
Nanapa-kevitra ny Vaomiera eropeana fa ny Alitalia Loyalty, ilay orinasa mitantana ny programa tsy fivadihan'ny orinasa Italiana "MilleMiglia," dia tsy maintsy amidy amin'ny mpandoa vola avo indrindra amin'ny alàlan'ny tolotra am-bahoaka, mangarahara ary misokatra amin'ny antoko liana rehetra. Saingy ny ITA, ilay kaompaniam-panjakana vaovao, dia tsy afaka handray anjara amin'ity tolotra ity ho mariky ny tsy fitohizan'ny orinasa roa tonta. Ny karatra MilleMiglia miely dia hifarana amin'ny tompona vaovao mbola tsy fantatra ary afaka miasa amin'ny faritra hafa ankoatry ny sehatry ny fiaramanidina.
Inona no mitranga amin'ny 15 Oktobra 2021?
Ny mpividy ny programa fahatokisana dia hanapa-kevitra amin'ny fomba fampiasana ny valisoa amina kilaometatra maro izay nangonin'ireo mpikambana (manodidina ny 5 tapitrisa). Satria trosa ho an'ireo mitantana ny programa ireo kilometatra ireo, dia ilaina ny mijery ny fomba "hamerenana" azy. Raha toa ny tompon'ny Loyalty vaovao, ohatra, marika fivarotana lehibe, dia afaka mamadika an'io kilaometatra io ho voucher shopping, hoy i Lazzerini.
Minisitry ny fizahantany any India manome fanantenana ny indostria